Ogaden News Agency (ONA) – VOA laanta afka axmaariga ah oo waraysatay Kaaliyaha HAD xafiiska arimha Ethiopia.
VOA laanta afka axmaariga ah oo waraysatay Kaaliyaha HAD xafiiska arimha Ethiopia.
Waxaa shalay oo ay taariikhdu ahayd 4 bishan August ay waraysatay VOA-da laanta af xamaariga Mudane Xassan Maclin oo ah kaaliyaha Hogaanka Arimaha Dibada ee JWXO ee xafiiska arimha Ethiopia. Waxaa kale oo la waraysatay ururada Ginbot 7 iyo ururka Afar peoples party. Arimaha laga wareystay ayaa waxaa ka mid ahaa shirkii ay 3xda urur ku yeesheen London.
Waraysigii mudane Xasan lala yeeshay ayaa u dhacay sidan.
•	Maxuu ahaa ujeedada shiraka aad ku qabateen London maalintii axda ee ay bishu ahyd 31/07/2011?
Jawaaab Xassan Macllin.
Shirku wuxuu ku saabsanaa sidii aanu isaga kaashan lahayn dhincyo badan sida Militaryga, dhaqaalha iyo siyaasdaba isla markaana aanu isugu soo dhawayn lahayn bulshooyinka dulman iyo kuwa la gumaystaba si ay cudooda u mideeyan oy isaga tuuri lahaayeen xukummada kaligii taliye Meles Zenawi.
Sida la wada ogyahay wax uu uula hadhay kaligii taliye Meles Zenawi ummadaha Ethiopia ee dulman & Ogadeniyaba ma jirto. Xasuuq jogata ah, boob cad, kufsi iyo xadhig, abaaro iyo macaluul dad keen ah & dhulkii beeraha ku haboonaa oo laga gadayo shirkado ajanabi ah ama shisheeye ah, intaasna waxaa dheer shidaalka Ogdaeniya oo uu marba shirkad inta uu heshiis been been ah la galo dadkii deegaankana la baro kicinayo.
•	Idinku u jeedadiinu maxay tahay ma in aad gooni isu taagtaanbaa mise waa in aad Ethiopia ka go’daan?
Sida aad la socotaan Ogadeniya taarkhdeedu mudo dheer ayay soo jirtay ma ahan maanta mid wakhti yar lagu badali karo.
Waxaan la wada soconaa sidii ay dawlada Ingriisku ugu wareejisay dalka Ogadeniya waligood shacabka Ogadenya waxba lama waydiinin, xukuumadaihii Ethiopia ka soo talinayayna dadkanagu waxaan gumaysi ahayn kama aynan arag, tan maanta joogtaaba ha u daraato e. Dadka reer Ogadniya waxay xaq u leeyiin in xaqooda la siiyo cadaaladana la ilaaliyo, loona ogolaado in ay aayahooda ka tashadaan.
•	Idinku (ONLF) hubka ma waxaad u qaadateen in aad 100% Ethiopia ka go’daanbaa miyanan idiin dhaamin in aad shacbiga reer Ethiopia ee walaalandin ah aad la noolaataan?
Sida aan horay kuugu soo sheegay anagu xukuumadaha Ethiopiada wax wanaag ah shabkanagu kumuusan arag, waxaan ka ahayd dil, kufsi , cadadis, iyo xadhgi aan loo kala aabo yeelin, sidaas darteed anagu hubka waxaanu u qaadanay in dadkanaga sida uu sharciga caalmiga ah uu dhigayo in afti laga qaado, iyaga ayayna u taala in ay go’ayaan iyo in kale.
Waxaa kale oo aynu la soconaa haddii ay qowmiyadi qowmiyad kale ay gumaysato oo ku tumato xaquuqal insaanka in aanay wada noolaan karin. Ethiopian-nimoda xoog kuma iman karto.
Anaga shacbiga la dulmay ayaan nahay, shacabka Ethiopia waa dad iyaguba dulman oo walaaladeen ah. Waxaan dadkanaga marba la soo marin akrin waa xukumadahii Ethiopia ka soo taliyay tan hadda joogataaba ha u daraato e.
Waxaynu wada oganahay in ay maanta Europe, North America, south east Asia ay mudoobeen. Africana wax u diidayaa in ay midowdo ma jiro, laakiin midow ma iman karo meel ay cadaalda daro, dulan iyo gumaysi uu ka jiro. Ethiopian-nimadu waa in ay ku timaadaa rabitaanka dadka e ma ah mid xoog ku iman karta.